သင့်ကို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံအကြောင်း – Myanmar Update News
သင့်ကို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံအကြောင်း
news uptodate | September 16, 2020 | Knowledge | No Comments
Photo Shop လား ၊ တကယ့်ပုံ အစစ်လား ဆိုတာ သင့်ကို ခွဲခြားမရအောင် ဖြစ်သွားစေမယ့် ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံ
ဒီပုံတွေကိုက Photoshop နဲ့ ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့ ပုံတွေလား ? ဒါမှမဟုတ် သဘာဝအတိုင်း သာမန်ရိုက်ကူး ထားတဲ့ပုံတွေလား ? အားလုံးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
၁။ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်း
မြူခိုးတွေရစ်ဆိုင်းနေတဲ့ ဒီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးက တော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (Wyoming) ပြည်နယ်မှာ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ဒီလမ်းမကြီးက ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်သွယ်ထားသလိုပါပဲ။
ဒီပုံကတော့သစ်ပင်တစ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းကိုတောမီးလောင်ကျွမ်းစပြုနေတဲ့ အချိန်မှာ သစ်တောဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က ရိုက်ယူထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရမ်းရောင်မီးတောက်တွေက နေထွက်ပေါ်လာတဲ့ အလင်းတန်းတွေက သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ဂြိုဟ်သားတွေရဲ့စွမ်းအင်တွေ ထွက်ပေါ်လာလေသလား လို့ထင်ချင်စရာကောင်းလှပါတယ်။
ဒါက တောင် (၂) လုံးကြားက ဧရာမလူ့ဘီလူးကြီးလား ? မဟုတ်ပါဘူး။ သစ်ငုတ်တိုပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဓာတ်ပုံရှုထောင့်ကြောင့် ရုတ်တရက်ဆို ဧရာမလူ့ဘီလူးကြီးလို့ ထင်မယ်ဆိုလည်းထင်ချင်စရာပါ။
၄။ ပယင်းကျောက်လား ?
ဒါကတော့ ရေခဲလှိုဏ်ဂူတစ်ခုရဲ့အဝကို နေဝင်ခါနီးအချိန် ကျရောက်တဲ့ နေရောင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း မသိရင်ရေခဲတုံးကြီးကို အလွန်လှပတဲ့ ပယင်းကျောက်တုံးကြီးသဖွယ် ထင်မှတ်မှားစေနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။
၅။ တကယ့်မြှားတစ်စင်းပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ရုပ်တုတကယ့်ကိုတိကျလွန်းတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ လေယာဉ်ပျံလာတဲ့အချိန်ကို တမင်စောင့်ပြီး ချိန်သားကိုက်ရိုက်ယူထားတဲ့ ပုံလို့သိရပါတယ်။ မသိရင်တော့ ရုပ်တုကနေ တကယ့်မြားတစ်စင်း ပစ်လွှတ်လိုက်သလို ပုံစုံဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ အိုင်ဒီယာကတော့ တကယ်ချီးကျူးစရာပါပဲ။
၆။ သဘာဝရဲ့အလှတရားရွှံနွံတောတစ်ခုအပေါ်မှာ ကျရောက်နေတဲ့ သက်တံ့ရဲ့ ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီး မျက်စိပသာဒ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲနော်။
၇။ ရာသီဥတု (၄) မျိုးနဲ့ ပြတင်းပေါက်
ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရဲ့ မှန်တစ်ချပ်စီက နွေဦးရာသီ၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းဦးရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ စတဲ့ ရာသီဥတု (၄) မျိုးကိုပုံဖော်ပြသနေသလို အလင်းအမှောင် နဲ့ မြင်ကွင်းက တိုက်ဆိုင်စွာထပ်တူကျနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံလား (၁) ပုံတည်းလား ?
ပလက်ဖောင်းပေါ်က တိုင်တစ်ခုကြောင့် ဒီပုံကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် မတူညီတဲ့ ဓာတ်ပုံ (၂) ခုပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ အမြင်မှားလောက်စရာပါပဲ။ သေချာကြည့်မှသာ ဒါဟာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတည်းဆိုတာ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၉။ ရောင်စုံအမွှေးနဲ့ရှားပါးတဲ့ ကြောင်မျိုးစိတ်
ဒါကရောင်စုံအမွှေးတွေနဲ့ ရှားပါးကြောင်မျိုးစိတ် မဟုတ်သလို ဆေးခြယ်သထားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ နေရောင် ကျရောက်နေတဲ့ ရောင်စုံပြတင်းပေါက် လိုက်ကာလေးဘေးမှာ လှဲနေတဲ့ သာမန်ကြောင်တစ်ကောင်ပါ။
၁၀။ ဇကာပေါက် ရေနွေးကြမ်းခွက်
အပေါက်တွေနဲ့ရေနွေးကြမ်းခွက်တွေထဲက ရေနွေးတွေက ဘာလို့အပြင်ကိုမထွက်ကျရတာလဲ ? သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုအထင်အမြင်မှားအောင်ကို ရေနွေးကြမ်းခွက်တွေကို ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ သင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။အခုဖော်ပြပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။source : shwekhi
Photo Shop လား ၊ တကယျ့ပုံ အစဈလား ဆိုတာ သငျ့ကို ခှဲခွားမရအောငျ ဖွဈသှားစမေယျ့ ဓာတျပုံ ၁၀ ပုံ
ဒီပုံတှကေိုက Photoshop နဲ့ ပွုပွငျဖနျတီးထားတဲ့ ပုံတှလေား ?ဒါမှမဟုတျ သဘာဝအတိုငျး သာမနျရိုကျကူးထားတဲ့ပုံတှလေား ? အားလုံးကို ကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ရဲ့ထငျမွငျယူဆခကျြလေးတှကေို ပွောပွပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။
၁။ ကောငျးကငျဘုံနဲ့ဆကျသှယျထားတဲ့ အဝေးပွေးလမျး
မွူခိုးတှရေဈဆိုငျးနတေဲ့ ဒီအဝေးပွေးလမျးမကွီးက တော့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု (Wyoming) ပွညျနယျမှာ ရှိတာဖွဈပါတ ယျ။ အမှတျတမဲ့ ကွညျ့ရငျတော့ ဒီလမျးမကွီးက ကောငျးကငျဘုံနဲ့ဆကျသှယျထားသလိုပါပဲ။
ဒီပုံကတော့သဈပငျတဈရဲ့ အတှငျးပိုငျးကို တောမီးလောငျကြှမျးစပွုနတေဲ့ အခြိနျမှာ သဈတောဝနျထမျးတဈယောကျက ရိုကျယူထားတဲ့ပုံဖွဈပါတယျ။ ဒီခရမျးရောငျမီးတောကျတှကေ နထှေကျပျေါလာတဲ့ အလငျးတနျးတှကေ သိပ်ပံစိတျကူးယဉျ ရုပျရှငျတှထေဲကလို ဂွို ဟျသားတှရေဲ့စှမျးအငျတှေ ထှကျပျေါလာလသေလား လို့ထငျခငျြစရာကောငျးလှပါတယျ။
ဒါက တောငျ (၂) လုံးကွားက ဧရာမလူ့ဘီလူးကွီးလား?မဟုတျပါဘူး။ သဈငုတျတိုပျေါကို တကျနတေဲ့ ကလေးတဈယောကျပါ။ ဓာ တျပုံ ရှုထောငျ့ကွောငျ့ ရုတျတရကျဆို ဧရာမလူ့ဘီလူးကွီးလို့ ထငျမယျဆိုလညျး ထငျခငျြစရာပါ။
၄။ ပယငျးကြောကျလား ?
ဒါကတော့ ရခေဲလှိုဏျဂူတဈခုရဲ့အဝကို နဝေငျခါနီးအခြိနျ ကရြော ကျတဲ့ နရေောငျကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ပုံရိပျဖွဈပါတယျ။ ဒါကလ ညျး မသိရငျရခေဲတုံးကွီးကို အလှနျလှပတဲ့ ပယငျးကြောကျတုံးကွီ သဖှယျ ထငျမှတျမှားစနေိုငျတာ အမှနျပါပဲ။
၅။ တကယျ့မွှားတဈစငျးပဈလှတျလိုကျတဲ့ ရုပျတုတကယျ့ကိုတိကလြှနျးတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ လယောဉျပြံလာတဲ့အခြိနျကို တမငျစောငျ့ပွီး ခြိနျသားကိုကျ ရိုကျယူထားတဲ့ ပုံလို့သိရပါတယျ။ မသိရငျတော့ ရုပျတုကနေ တကယျ့မွားတဈစငျး ပဈလှတျလိုကျသလို ပုံစုံဖွဈအေ ငျ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဓာတျပုံဆရာရဲ့ အိုငျဒီယာကတော့ တကယျခြီးကြူးစရာပါပဲ။
၆။ သဘာဝရဲ့အလှတရားရှံနှံတောတဈခုအပျေါမှာ ကရြောကျနတေဲ့ သကျတံ့ရဲ့ ပုံရိပျဖွဈပါတယျ။ တကယျ့ကို ရငျသပျ ရှုမောဖှယျကောငျးပွီး မကျြစိပသာဒ ဖွဈစနေိုငျတဲ့ မွငျကှငျးပါပဲနျော။
၇။ ရာသီဥတု (၄) မြိုးနဲ့ ပွတငျးပေါကျ
ပွတငျးပေါကျတဈခုရဲ့ မှနျတဈခပျြစီက နှဦေးရာသီ၊ နှရောသီ၊ ဆောငျးဦးရာသီ၊ ဆောငျးရာသီ စတဲ့ ရာသီဥတု (၄) မြိုးကိုပုံဖျောပွသနသေလို အလငျးအမှောငျ နဲ့ မွငျကှငျးက တိုကျဆိုငျစှာထပျတူကနြတေဲ့ပုံပဲဖွဈပါတယျ။
၈။ ဓာတျပုံ (၂) ပုံလား (၁) ပုံတညျးလား ?
ပလကျဖောငျးပျေါက တိုငျတဈခုကွောငျ့ ဒီပုံကို အမှတျတမဲ့ကွညျ့လိုကျရငျ မတူညီတဲ့ ဓာတျပုံ (၂) ခုပေါငျးစပျထားတယျလို့ အမွငျမှားလောကျစရာပါပဲ။ သခြောကွညျ့မှသာ ဒါဟာ ဓာတျပုံတဈပုံတညျးဆိုတာ သိနိုငျပါလိမျ့မယျ။
၉။ ရောငျစုံအမှေးနဲ့ရှားပါးတဲ့ ကွောငျမြိုးစိတျ
ရောငျစုံအမှေးတှနေဲ့ ရှားပါးကွောငျမြိုးစိတျ မဟုတျသလို ဆေးခွ ယျသထားတာလညျး မဟုတျပါဘူး။နရေောငျကရြောကျနတေဲ့ ရော ငျစုံပွတငျးပေါကျ လိုကျကာလေးဘေးမှာ လှဲနတေဲ့ သာမနျကွောငျတဈကောငျပါ။
၁၀။ ဇကာပေါကျ ရနှေေးကွမျးခှကျ
အပေါကျတှနေဲ့ရနှေေးကွမျးခှကျတှထေဲက ရနှေေးတှကေ ဘာလို့အပွငျကိုမထှကျကရြတာလဲ ? သခြောကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ ဒီလိုအထငျအမွငျမှားအောငျကို ရနှေေးကွမျးခှကျတှကေို ဖနျတီးထားတယျဆိုတာ သငျသဘော ပေါကျပါလိမျ့မယျ။အခုဖျောပွပေးတဲ့ အ ကွောငျးအရာလေးကို အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျတှအေား လုံးကို အထူးကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။source : shwekhit
သင့်အိမ်မှာ အကြောင်းအရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေရင်
ယခုအဖြစ်ပျက်လေးမှာ ဘွဲ့ရနှင့် ငါးစိမ်းသည် ဘယ်သူကပညာပိုတတ်လဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါ